သုံးယောက်ကောင်းကင် (မောင်သစ်မင်း) | လမ်းအိုလေး
June 5, 2011 by lanolay	1 Comment
သူ့ကောင်းကင်ပေါ်က တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကို လှီးဖြတ်လိုက်တယ်။
ပြီးတော့ ဥယျာဉ်ကို ကောင်းကင်နဲ့ထုပ်
အားလုံးကို လက်ကိုင်ပ၀ါတစ်ထည်ထဲမှာ စုထုပ်လိုက်တယ်။
– Translated: မောင်သစ်မင်း –
Some Memorable Works
သုံးယောက်ကောင်းကင် – 293KB
တေးမြုံငှက် – 3.02MB
မိုးညအမှောင်ရိပ်မှ … တေးမြုံငှက်၏ အချစ်အိမ် (Mizzima Burmese)
PDF Src: MMCPcommunity.net
Obituary : တေးရေးဆရာ မောင်သစ်မင်းသည် ဇွန်လ ၅ ရက်နေ့၊ ထိုင်းနိုင်ငံ ဒေသစံတော်ချိန် နံနက် ၉ နာရီ မိနစ် ၂၀ (မြန်မာစံတော်ချိန် ၉ နာရီ) အချိန်က ထိုင်းနိုင်ငံ၊ ဘန်ကောက်မြို့ရှိ ဆမ်မီတဝေ့ ဆေးရုံကြီး၌ ကွယ်လွန်ခဲ့ကြောင်း …
News Src: News-Eleven.com.
Categories: Cover Arts, Kabyarz, MP3s, PDFs | Tags: သုံးယောက်ကောင်းကင်, တေးမြံငှက်, မောင်သစ်မင်း, ebook, Mg Thit Min, Miroslav Holub, PDF, Vasko Popa, Zbigniew Herbert | Permalink.
One thought on “သုံးယောက်ကောင်းကင် (မောင်သစ်မင်း)”
ဇေယျာလင်း ကဗျာစုစည်းမှု [v 1.2] - PDF